News Collection: नयाँ आइप्याड : अंगुर अमिलो छ
नयाँ आइप्याड : अंगुर अमिलो छ
काठमाडौँ- बुधबार राति अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा नयाँ आइप्याड लन्च गरियो। गत वर्षको मार्चमा यस्तै सम्मेलनमा तत्कालीन सीइओ (हाल दिवंगत) स्टिभ जब्सले आइप्याड टु सार्वजनिक गरे जस्तै यस पटक आइप्याड थ्री सार्वजनिक गरिने हल्ला थियो। तर एप्पलले यसलाई आइप्याड थ्री नभनी नयाँ आइप्याड मात्र भनेको छ।
नेपालको सबैभन्दा धनी पार्टी भनिने माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एक कामरेडले आइप्याडले खिच्दै गरेको फोटो सार्वजनिक हुँदा त्यसले सामाजिक सञ्जालहरुमा निकै चर्चा पाएको थियो। नेपालमा आइप्याड केही सीमित व्यक्तिहरुको पहुँचमा मात्र आइप्याडको क्रेज र यसको मिडिया कभरेजले आइप्याड भनेपछि सबैलाई लोभ्याइदिन्छ। निश्चिय पनि ट्याब्लेट बजारमा आइप्याडको प्रतिस्पर्धी अरु छैन। तर सिक्काका दुई पाटो हुन्छन्, अर्को पाटोको बारेमा खासै चर्चा हुँदैन। यसलाई आफ्नो बनाउन सक्नेहरुले त स्वभावतः यसको उपयोगिताबारे चर्चा गर्लान्। तर यसलाई आफ्नो बनाउन नसक्ने धेरैका लागि चित्त बुझाउने मेसो के छ त ? 'अंगुर अमिलो' भन्ने ! आइप्याडलाई अमिलो अंगुर भन्न यति तर्क त गर्न सकिन्छ
• साह्रै महँगोः नयां आइप्याडको सबैभन्दा सस्तो संस्करण नै ५ सय अमेरिकी डलर
पर्छ। त्यहाँमाथि यो नेपालमा किन्न पाइने चिज पनि हैन। नेपालका एप्पल
प्रडक्ट बेच्ने स्टोरहरुमा आइपड र म्याक कम्प्युटरमात्रै पाइन्छन्।
अमेरिकाबाट मगाउने हो भने भ्याट र सबै कर तिर्दा आइप्याडको सबैभन्दा
सस्तो संस्करणको मूल्य झण्डै ५७ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ।
• उपयोग के गर्ने ? : आधा लाखभन्दा बढी पैसा हाल्नु पर्ने यो सामानको
उपयोग केमा गर्ने त्यसमा निश्चित हुनुपर्‍यो पहिले। केही धनाढ्य, लाखौँ
तलब खाने सीइओ, व्यापारीहरुका लागि 'शान' देखाउन पनि यो उपयोगी हुन
सक्ला। तर तपाईँ केका लागि यसको उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ ? टाइप गर्न ?
यसमा ल्यापटपमा जस्तो कीबोर्ड छैन। अनि यसमा वर्ड, पावरप्वाइन्ट केही पनि
छैन। त्यस्तै खालको सुविधा भएको एप्स राख्‍ने भए थप पैसा तिरेर
किन्नुपर्छ। त्यो किन्न पनि तपाईँसित इन्टरन्यासनल क्रेडिट कार्ड
हुनुपर्‍यो। न यसमा प्रीति, कान्तिपुर जस्ता नेपाली फन्टहरु डिस्प्ले
हुन्छन्, न त्यसमा भएका बाहेक अरु फन्ट थप्न।
• इन्टरनेट नभई हुन्नः अलि महँगो खालेमा त थ्रीजी कार्ड हालेर इन्टरनेट चलाउन
सकिन्छ तर सबैभन्दा सस्तो संस्करणमा इन्टरनेट चलाउन वाइफाइको भर
पर्नुपर्छ। यसमा गेम डाउनलोड गर्न, युट्युबको भिडियो हेर्न, एप्स डाउनलोड
गर्न, पत्रिकाहरुका डिजिटल कपी पढ्न इन्टरनेट नभई हुन्न। नेपालको स्लो
इन्टरनेटमा डाउनलोड तपाईँका लागि टाउको दुखाइ हुनसक्छ। सहज र द्रुत
इन्टरनेट भएका ठाउँमा मात्र यसको प्रभावकारिता बढी हुनसक्छ।
• झण्झटिलो: जतिसुकै विलासी भए पनि प्रविधि सजिलो र सहज हुनुपर्ने हो। तर
आइप्याडको उपयोग खासाका उत्पादन जति सजिलो छैन। आइप्याडमा वा आइपडमा
समेत डेस्कटप कम्प्युटरमा भएका कुनै फोटो, गीत, भिडियो राख्‍नुपर्‍यो भने
आइट्युन्सको प्रयोग गरी लामो प्रक्रिया अपनाएर 'सिन्क' गर्नुपर्छ। यसमा ल्यापटपमा पेन ड्राइभ
जस्तो चाहेको बेला स्वात्त घुसायो, प्रयोग गर्‍यो, झिक्यो गर्न युएसबी पोर्ट हुँदैन।
• पैसामाथि पैसाः हुनत आइप्याडमा फ्री एप्स पनि पाइन्छन्। तर अलि राम्रा
एप्सहरु राख्‍न भने पैसा तिर्नै पर्छ। आइप्याड मात्र खाली त केही हैन।
यसलाई चलाउन एप्सहरु पनि राख्नै पर्छ। ती राख्‍न भने नकिनी सुख छैन। मतलब
तपाईँले एक पटक हजारौँ हालेर किनेको सामानमा फेरि फेरि पनि पैसा
हालिरहनुपर्छ। एप्स किन्नलाई क्रेडिट कार्ड आवश्यक हुन्छ। फ्री एप्स
डाउनलोड गर्न पनि अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। प्रक्रिया थाहा नभएकाहरुलाई यो पनि
कम्ता झण्झटिलो हुन्न। पैसा भएको तर बुद्धि नभएका धनीमानीहरुले पाएका
फ्री एप्स पनि इन्सटल नगरी आइफोन, आइप्याड यत्तिकै चलाइरहेको देखिन्छ
• फोटो र भिडियो झुरः जतिसुकै गफहरु दिए पनि आइप्याड टुसम्म आइपुग्दा फोटो र भिडियो
गुणस्तर प्रचार गरिए अनुसार छैन। अलि ठीकै खालको डिजिटल क्यामेराहरु
जतिको पनि नभएको बताउँछन् केही प्रयोगकर्ता।
• ठूलो आइफोनः वास्तवमा आइप्याड ठूलो आकारको आइफोन हो भन्दा फरक नपर्ला।
आइफोन सानो र गोजीमा हाल्न मिल्ने भएकोले डिस्प्ले साइज ठूलो चाहनेलाई
बाहेक आइप्याडभन्दा आइफोनै प्रयोगकर्ताका लागि सहज हुनसक्छ।